Nagu saabsan - Shanghai Yubing Qalabka Co., Ltd.
Waxaan nahay soo saare horseedka ah ee qalabka qaboojinta oo tayo sare leh (oo daboolaya qaboojiyeyaasha furan iyo kuwa xiran, hawo uumiyeyaasha iyo qaboojiyaha hawada) iyo qalabka daaweynta biyaha ee khuseeya (daaweynta biyaha RO, Filtration iyo Ultra-filtration, jilicsanaanta biyaha, Nidaamka Kiimikada ee Daawada iyo Qashinka MBR Nidaamka Daaweynta Biyaha) oo leh ku dhowaad 20 sano aqoon iyo khibrad.
Muddo tobanaan sano ah, waxaan siinay qalab tayo leh iyo adeeg macaamiisheena waxaanan aheyn lamaane caan ah oo caan ka ah warshado badan oo ay kamid yihiin tamarta, saliida iyo gaaska, warshadaha culus, warshadaha kiimikada, warshadaha tamarta, warshadaha batroolka, saxarka & waraaqaha. warshado bir ah, codsiyada macdanta, warshadaha cuntada iyo qalabka loo habeeyay meelaha bulshada sida dhismaha xafiiska, xarunta tareenka.
Intii lagu gudajiray wada shaqeynta macaamiisha dhanka warshadaha, waxaa naloo aaminay inaan siino qalabka daaweynta biyaha ee khuseeya oo kahadlaya cadeynta biyaha ilaa nidaamka dib-u-warshadaynta-qashinka-biyaha. Khibradda dhif iyo khibrad qoto dheer ayaa naga dhigtay takhasus arimahan ku takhasusay.
Kooxdayada injineernimada waxay khabiir ku yihiin qaboojinta nashqadeynta naqshadeynta si loo kordhiyo waxtarka iyada oo la hubinayo u hoggaansamida rukhsadaha hawlgalka ee habboon iyo shirkaddeennu waa mid jajaban oo si fudud ula qabsan kara shuruudaha iyo xaaladaha macaamiisheena iyadoo diiradda la saarayo shuruudaha guud ee macaamiisha sida qorshaynta goobta, biyaha & tayada hawada, qiimaha la qiimeeyay, sahlanaanta howlgalka iyo sharafnimada muddada dheer iyo xirfad ahaaneed ee warshadaha.
Kooxda firfircoon ee ICE waxay rajeyneysaa inay fududeyso sii wadida guusha wadajirka ah ee macaamiisheena adduunka.
Bixi badeecooyin wax soo saar leh, dhaqaale leh oo muddo dheer soconaya iyo adeegyo u hoggaansamaya
baahida iyo rajooyinka macaamiisheena.
Mowjadahayaga qaboojinta waxaa loogu talagalay inay waaraan oo
waxay leeyihiin saameyn hooseeya oo xagga deegaanka ah.
- HIIGSIGEENA -
Khabiir khibrad leh + Qalabaynta wax soosaarka horumarsan + Shaqaale xirfadlayaal ah oo hoos imanaya xeerka dhaqanka ee la soo saaray
by Nidaamka Maareynta Tayada = 100% wax soo saar qanacsan
- QIIMEENA -
Hordhaca Saldhigga Waxsoosaarka
Goobta wax soo saarka ICE ee ku taal Gobolka Shandong oo faa iidooyin ku leh xarumo si fiican u qalabeysan, shaqaale xirfadlayaal ah oo ku filan iyo kheyraadka dhulka, iyo siyaasad taageero maxalli ah oo ku saabsan hal-abuurnimada iyo hagaajinta tikniyoolajiyadda.
Soosaarka caatada ah waxaa lagu dabaqaa saldhigeena wax soo saar si loo damaanad qaado badeecadaha tayada sare leh oo leh astaamo tartan ah, isla markaa, waxay siisaa dabacsanaan xaga waqtiga hogaaminta iyo awooda wax soo saar, gaar ahaan mashruuca habeysan.